ktmkhabar.com - मुटुदेखि किडनीलाई स्वस्थ राख्ने एभोकाडोका जान्नुहोस् फाइदा र बफाइदाहरु!
आइतबार, पुष १८ २०७८
एभोकाडो (Avocado) लाई नेपालीमा घिउ फल (Butter Fruit) भनिन्छ । मध्ये अमेरिका र मेक्सिको मा उत्पति भएको उष्ण प्रदेशीय यो एक राम्रो नगदे फल हो ,यो फलको बैज्ञानीक नाम “पेर्से अमेरिकाना Persea Americana”हो । सबै भन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा मेक्सिको पर्छ । समुन्द्र सतह बाट २५०० मिटर सम्म एस्को खेती गर्न सकिन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ्यका लागि लाभदायक फ्याट र कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले एभोकाडो खानुका थुप्रै फाइदा छन् । विभिन्न अध्ययनमार्फत वैज्ञानिकहरुले यसमा अत्यन्तै फाइदाकारक तत्व हुने बताएका छन् ।नेपालका विभिन्न ठाउँमा एभोकाडो फलेको पाइएपनि मानिसहरुले यसको महत्व नबुझेकाले सेवन गर्दैनन् ।
संसारकै फलमध्येमा धेरै पोषक तत्व भएको फलका रुपमा लिइने एभोकाडो नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा केही वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक खेती सुरु भएको पाइन्छ ।
एभोकाडो खानुका फाइदा :
१.उत्तम पाचन प्रणालीका लागि
यसमा घुलनशील र अघुलनशील फाइबर हुन्छ जसले पाचन प्रणालीमा मद्दत गर्दछ। घुलनशील र अघुलनशील फाइबर पाचनका लागि धेरै महत्त्वपूणर् हुन्छन्,। थप रूपमा, एभोकाडोले ग्यास्ट्रिक र पाचन रस उत्तेजित गर्दछ फलस्वरुम शरिरले पोषकहरू सबै भन्दा कुशल र द्रुत तरिकामा अवशोषित गर्न सक्छ।
२.छाला र कपालका लागि
एवोकाडोमा धेरै भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन् जसले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। एवोकाडोमा पाईने क्यारोटीनोइडले छालालाई सनबर्नबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। एभोकाडोमा उच्च स्तरको बीटा क्यारोटीन ईन्जाइमली प्रोभिटामिन हुन्छ, जसले छालालाई लामो समयसम्म विभिन्न समस्याहरूबाट बचाउँछ।
३.सास गनाउँने समस्या हटाउनका लागि
एभोकाडोको सेवनले सास गनाउँन बाट पनि जोगाउँदछ, जुन मुख्यतया अपच वा खराब पेटको कारणले हुन्छ। मुखको गन्ध पाचन स्वास्थ्य सुधार गरेर हटाउन सकिन्छ, र एभोकाडोसमा हुने एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिआक्सीडन्ट फ्लाभोनोइड्सले तपाईंको मुखमा ब्याक्टेरिया मार्दछ जसले सास को नरामो्र गन्ध हटाउँदछ। यो मुखको क्यान्सर रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
४.एभोकाडोले आँखाको दृष्टि सुधार गर्न मद्दत गर्दछ-
एभोकाडोले तपाईंको आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। यसमा क्यारोटेनोइडहरू, लुटेन र ज़्याक्टिन हुन्छ जसले तपाईंको आँखालाई मोतीबिंदु, उमेरसँग सम्बन्धित आँखाको रोगहरू र म्याकुलर डिजेनेरसन बिरूद्ध मद्दत गर्दछ। आँखाको समस्याको मुख्य कारण आँखामा जम्मा हुने फ्रि रेडिकलहरू हुन्। एभोकाडोमा हुने विशेष क्यारोटीनोइडको एन्टिअक्सिडन्ट गतिविधिले फ्रि रेडिकलहरूको प्रभावलाई तटस्थ गर्दछ।
५. कलेजोको लागि
एभोकाडोमा जैविक यौगिकहरू हुने गर्दछ जसले कलेजोको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। कलेजोको रोग प्रायः हेपेटाइटिस सी द्वारा हुन्छ। भर्खरै गरिएको अनुसन्धान अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि एभोकाडोले तपाईंको कलेजोलाई विभिन्न समस्याहरूबाट बचाउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ।
६.एभोकाडोको प्रयोगले मुटु सम्बन्धी रोगहरूदेखि जोगाउदछ
एभोकाडो मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागी उत्तम छ। यसमा हुुनृ बीटा (सिटोस्टेरा‘लले स्वस्थ कोलेस्ट्रा‘लको स्तर कायम राख्न मद्दत गर्दछ। अनुसन्धान अध्ययनहरूको अनुसार एभोकाडो सेवनले एचडीएल कोलेस्ट्रोलको एन्टिथेरोजेनिक गुणहरू बढाउन सक्दछ, जसले तपाईंको हृदयलाई एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनीहरू कडा बनाउने) को जोखिमबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। यसमा हुने पोटेशियमको महत्त्वपूणर् स्तरले तपाईंलाई उच्च बीपीको बिरूद्ध पनि मद्दत गर्दछ।
७.एभोकाडोले क्यान्सर उपचार गर्न मद्दत गर्दछ
एभोकाडोले स्तन क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्दछ। एभोकाडोमा क्यारोटीनोइड्स र मोनोसैच्युरेटेड फ्याट हुन्छ, जसले क्यान्सर कम गर्नमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। एवोकैडोमा ग्लुटाथियोन पनि हुन्छ जुन एन्टिअक्सिडन्ट हो जसले शरिरको कोशीकाहरुलाई फ्रि रेडिकलहरूको खतरनाक प्रभावहरूबाट बचाउँछ।
जो मानिसहरू किडनी डिसअर्डरबाट ग्रस्त छन् उनीहरूले खनिजहरू र फ्ल्युडहरूको सन्तुलन कायम राख्न एभोकाडो खानुपर्दछ। पोटेशियम एक खनिज हो जसले सामान्य हृदय दर कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तरल पदार्थको सन्तुलन किडनी कार्यहरूका लागि महत्त्वपूणर् छ, यसकारण एभोकाडोले शरीरमा तरल पदार्थ र विषाक्त पदार्थहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्दछ।